अर्थ खबर Archives - Page2of9- www.kchhakhabar.com
निरन्तर घटेको सुनको मूल्य बुधबार ह्वात्तै बढ्यो, थाहा पाउनुहोस् आजको मूल्य
काठमाडौं । सुनको मूल्य ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार ५ सय रुपैयाँले बढेर ५८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । महासंघका अनुसार लगातर पाच दिन सम्म स्थिर रहेको सुनको मूल्य आज भने ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । मंगलबार सुन प्रतितोला ५७ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको थियो भने एक्कासी बढेर ५८ हजार ४०० मा कारोबार भइरहेको हो । त्यस्तै तेजावी सुन भने बुधबार प्रतितोल...
५ लाख घुससहित उपसचिव अधिकारी पक्राउ
काठमाडौँ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव लीला अधिकारी ५ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेकी छिन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरेको हो। ठेक्को रकम भुक्तानी लगायतका विषयमा उनले ठेकदारसँग घुस लिएकी थिइन्। कार्यकारी अधिकारी रहेकी अधिकारीसहित इन्जिनियर बिजेन्द्र श्रेष्ठलाई आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी एकेडेमी अगाडि गाडीमै घुस लिँदै गर्दा उनीहरू पक्राउ ...
काठमाडौं/ नेपाली बजारमा आज छापावाला सुन प्रतितोला ५८ हजार २ सयमा कारोबार भईरहेको छ । नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघले जनाएअनुसार छापावाला सुनको मुल्य हिजो आईतबारको तुलनामा आज ३ सय रुपैयाँ बढेको हो । यस्तै तेजावी सुन प्रति तोला ५७ हजार ९ सयमा कारोबार भईरहेका छ । हिजो छापावाला सुन ५७ हजार ९ सय र तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ५७ हजार ६ सयमा कारोबार भएको थियो । आज चादी प्रति तोला ७ सय ४५ रुपैयाँमा का...
​खर्चको तुलनामा आम्दानी गर्न नसकेपछि सरकारी ढुकुटी घाटामा
काठमाडौं । सरकारले खर्चको तुलनामा आम्दानी गर्न नसकेपछि सरकारको ढुकुटी ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ । ‘शुक्रबार साँझको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा सरकारले कुल ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले भने, ‘खर्च ७ खर्बभन्दा बढी भएको छ, तर आम्दानी भने ६ खर्ब ५३ अर्ब मात्रै भएको छ ।’ शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा मुलुकको...
आर्थिक विधेयक संसदमा टेवलः पेस
विराटनगर । प्रदेशसभा १ को बैठकमा बुधबार प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधी नियमित तथा व्यवस्थि तगर्ने सम्बन्धमा बनेको प्रदेश आथिृक कार्यविधी २०७४ विधेयक पेश भएको छ आथिृक मामिला तथा योजना मन्त्रि इन्द्रबहादुर आङवोले संसदमा पेस गरेका हुन । ११ परिच्छेद ६४ धारा रहेको विधेयकमाथि ज्ञानेश्वर राजबंशी, अम्विका थापा,लिलिबल्भव अधिकारी, शिवनारायण गन्गाई, बवोधिताकुमारी चौधरी, मोहन कुमार खड्कालगायतले टिप्पणी तथा ...
काठमाडौं/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असारभित्र तीन सय ५९ स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालनमा नल्याए कारवाही गर्ने भएको छ । निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले बैशाखभित्रमा दुई सय ४३ तहमा शाखा खोलिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तै हाल जान समस्या देखाइरहेका एक सय १६ तशमा असारभित्र शाखा सञ्चालनमा ल्याइसक्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । ‘एक सय १६ तहमा पनि धेरैले जाने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन्, केहीमा इच्...
नेपालमा अरबौँमा हुन्छ सुन तस्करी, नेपाल तस्करहरुको स्वर्ग गृहमन्त्री बादल (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा अरबौँमा सुन तस्करी हुने गरेको खुलासा गरेका छन् । आज बिहान नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका प्रतिनिधीहरुसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री थापाले खास–खास नाकाबाट सुन र मानवतस्करी हुने गरेको पनि बताए । उनले हत्याकाण्डहरु भइरहेको र लागुऔषधको पनि अरबौँको कारोबार भइरहेको बताँउदै तिनीहरुलाई कसरी रोक्ने ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, ‘नेपाल तस्करहरुको यस्तो स्वर्ग बने...
Search सुन ५ सयले बढ्यो
काठमाडौं/बिहिबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपेयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन प्रतितोला ५७ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज सुन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेर ५७ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन ७ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी प्रतितोला १० रुपैयाँले बढेर ७ सय ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
बिहिबार, चैत्र ०८, २०७४
मदिराको बिर्काेमा टाँस्ने राजश्वको स्टिकर पनि नक्कली !
वीरगञ्ज/ मदिराको बिर्काेमा टाँस्ने राजश्वको नक्कली स्टिकर छाप्ने भारत कलकत्ताको एक कम्पनीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले जनाएको छ । नक्कली स्टिकर प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग विभिन्न चरणमा थप बयान लिने काम भइरहेको भन्दै प्रमुख कर अधिकृत गोपीकृष्ण कोइरालाले भने, “नक्कली स्टिकर छाप्ने सो भारतीय कम्पनीको नाउँ सार्वजनिक गर्दा सतर्क हुने भए...
२६ वर्षपछि बलेवा विमानस्थलमा जहाज
५ चैत, पोखरा । व्यवसायिक उडान गर्ने लक्ष्यसहित २६ वर्षपछि बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा जहाज अवतरण हुँदा स्थानीयदेखि जनप्रतिनिधिसम्म दंग छन् । पोखरा-बागलुङ सडक मार्ग बनेपछि २०४८ सालमा बन्द भएको बलेवा विमानस्थलबाट फेरि व्यवसायिक उडान सुरु हुने भएपछि बागलुङवासीमा खुसी छाएको हो । तारा इयरलाइन्सका ३ जना पाइलटले तीन पटक नै परीक्षण गरेपछि, ‘नियमित उडान भर्न सकिने बताएका छन् ।’तारा एयरलाइन्सको १९...
सोमबार, चैत्र ०५, २०७४